लक्ष्मी गदाल र नायक किशोर खतिवडाको घ’टनामा आयो यस्तो नयाँ ट्वीष्ट ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
लक्ष्मी गदाल र नायक किशोर खतिवडाको घ’टनामा आयो यस्तो नयाँ ट्वीष्ट ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
April 22, 2021 AdminLeaveaComment on लक्ष्मी गदाल र नायक किशोर खतिवडाको घ’टनामा आयो यस्तो नयाँ ट्वीष्ट ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
एक जना महिलासँग नाम जोडिएपछि नायक किशोर खतिवडाले सन्सारबाटै विदा लिने प्रयास प्रयास गरेका छन् । उनको नाम लक्ष्मी गदालसँग जोडिएको थियो । लक्ष्मीले किशोरले आफूलाई पेट बो काएको भनेकी थिइन् । किशोरले त्यस्तो प्रयास गरेपछि उनका केही साथीहरुले किशोरलाई ज्ञानेश्वरस्थित हिमाल अस्पताल पुर्याएक थिए ।
अस्पतालको इमर्जेन्सीमा स्वास्थ्य जाँच गर्दा शरीरभित्र पुगेको भेटिएन । ‘उहाँले वि ष से व न गरेको भनेर ल्याइएको थियो, तर हामीले चेक गर्दा त्यसको असर भेटेनौं,’ अस्पतालका हेल्थ एसिस्टेन्ट डम्बर बोहोराले भने, ‘उहाँले खोज्दा साथीहरुले रोक्नुभएको रहेछ ।’ बोहोराका अनुसार खतिवडालाई डि प्रे स नको लक्षण देखिएको थियो । त्यसपछि अस्पतालले उनलाई भर्ना भएर उपचार गर्न सिफारिस गरे पनि किशोरले नमानेपछि घर फर्काइएको थियो ।
किशोरले आफूले दे ह त्या ग प्रयास गरेको स्वीकार गरेका छन् । अहिले पनि आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था सामान्य नभएको किशोरले बताए । यस्तो प्रयास गर्नुको कारण भने उनले खुलाउन चाहेनन् । अहिले आफू साथीहरुको कोठामा बसिरहेको किशोरले जानकारी दिए । अलिकति फ्रेस भएपछि आफै मिडियाको सम्पर्कमा आउने उनले बताए । थप भिडियो यहाँबाट हेर्नुहोस्ः
१२ बजे राती चि’हान खन्ने धामी र बाबा बीच पर्यो ल’फडा ! हेर्नुहोस (भिडियो सहित)